क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा रोचक खेलः जब संसारकै १ नम्बर टिमको इज्जतको धज्जी उड्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा रोचक खेलः जब संसारकै १ नम्बर टिमको इज्जतको धज्जी उड्यो
एजेन्सी। क्रिकेटमा सधैं केही न केही हुन्छ । ब्याटिङ हुन्छ, बलिङ हुन्छ, फिल्डिङ हुन्छ । तर आइतबार राती भएको खेलमा यतिमात्र भएन आइसीसीको वन डे बरियतामा नम्बर १ टिमको नराम्रोसँग अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत समेत भयो । किनकि जब संसारकै १ नम्बर टिमले हार्छ र १३ औं बरियताको टिमले जित्छ यसलाई सामान्य क्रिकेट होइन आश्चर्य भनिन्छ । आइतबार यही भयो । निकै खतरनाक र रोमाञ्चक खेलमा आइसीसीको १३ औं बरियताको टिम स्कटल्याण्डले नम्बर १ टिम इङल्याण्डलाई ६ रनले पराजित गर्यो ।
यो खेल धेरै कारणले विशेष बन्यो । खेलमा रनको वर्षा भयो । ५० ओभरको एउटै खेलमा २४ वटा छक्का र ७५ वटा चौका प्रहार भए । कूल ७३६ रन बने । अन्ततः आइसीसीको बरियतामा नम्बर १ टिमलाई बरियताको १३ औं टिमले नराम्रोसँग हराइदियो र इतिहास रच्यो । यो यस्तो इतिहास बनेको छ जसले नेपालजस्तो भर्खरै वन डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको टिमलाई उत्साही बनाउँछ र क्रिकेटमा यस्तै अर्को इतिहास रच्ने प्रेरणा दिन्छ ।
खेलमा टस हारेको स्कटल्याण्ड पहिले ब्याटिङ गर्न उत्रियो । यस्तो लाग्थ्यो सबै ब्याट्सम्यान कुटेरै खेल्ने मन बनाएर आएका थिए । ओपनर क्रस र कोएट्जसले नै टिमको पशिलो विकेटको शाझेदारी सय माथि पुर्याए । टिमको स्कोर १०३ रन हुँदा १४ औं ओभरमा कोएट्जर आउट भए । त्यसपछि ३ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका केलम म्याकलोडले त मैदान छोड्नै मानेनन् । ९४ बलमा १६ चौका र ३ छक्का हान्दै १४० रन बनाए र अन्तिमसम्म नटआउट रहे ।
म्याकलोड तिनै खेलाडी हुन् जसले विश्वकप छनोटमा अफगानिस्तानविरुद्ध १५७ रन बनाउँदै नटआउट रहेका थिए । आफ्नो इनिङमा स्कटल्याण्डका ५ खेलाडीले ३० रनभन्दा बढीको स्कोर बनाए । यसमा एक शतक र दुई अर्धशतक थिए । स्कटल्याण्डका रिचि बेरिङटनबाहेक कुनै पनि खेलाडीको स्ट्राइक रेट सयभन्दा तल थिएन । अर्थात ब्याटिङ गर्न आएका ७ मध्ये ६ जना खेलाडीले आफूले खेलेको बलभन्दा धेरै रन बनाएका थिए । अन्ततः ५० ओभरमा स्कटल्याण्डले ३७१ रनको विशाल स्कोर खडा गर्यो । हेर्नुहोस् स्कटल्याण्डको स्कोरकार्ड -
अब ब्याटिङ गर्ने पालो इङल्याण्डको थियो । इङल्याण्डको लागि यो निकै ठूलो चुनौती थियो किनकि लक्ष्य निकै विशाल थियो र खेल मात्र होइन इज्जत पनि दाउमा थियो । स्कटल्याण्डजस्तो तुलनात्मक रुपमा कमजोर टिमले नम्बर १ टिमलाई यति विशाल लक्ष्य दिएपछि स्वभाविक रुपमा इङल्याण्ड दबाबमा आयो । तर, इङल्याण्डका ब्याट्सम्यान पनि सजिलै हार मान्नेवाला थिएनन् । इङल्याण्डका ओपनरले पनि निकै बलियो सुरुवात गरे । उनीहरुले पहिलो विकेटकै लागि १२९ रनको साझेदारी गरे ।
ओपनर जोनी बेरिस्टो त टि–२० खेले । उनले मात्रै ५९ बलमा १०५ रन बनाए । यसका लागि उनले १२ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । १२९ रनको स्कोरमा १३ औं ओभरमा इङल्याण्डको पहिलो विकेटको रुपमा जेसन रोय आउट भए । यति बेलासम्म इङल्याण्डको नेट रनरेट स्कटल्याण्डको भन्दा निकै माथि थियो । यसपछि आएका एलेक्स हल्सले पनि अर्धशतक बनाए । तर त्यसपछिका ब्याट्सम्यान टिकेर खेल्न नसक्दा ३७ ओभरको खेल हुँदासम्म इङल्याण्डको स्कोर २७७ रन मात्र थियो र ७ विकेट गइसकेको थियो । हेर्नुहोस् इङ्ल्याण्डको स्कोरकार्ड -
क्रिजमा दुवै नयाँ ब्याट्सम्यान थिए मोइन अली र लियाम प्लंकेट । यस्तो लागिरहेको थियो कि अब इङल्याण्ड हार्यो । तर होइन यो कुनै सामान्य टिम थिएन । विश्वको नम्बर १ बरियताको टिम थियो । मोइन अलीले ३३ बलमै ४६ रन र लियाम प्लंकेटले ४५ बलमा ४७ रन बनाएपछि इङल्याण्ड खेलमा फर्कियो । खेलको असली रोमाञ्च अन्तिम ओभरमा देखियो । मोइन अली ४६ औं ओभरमा ४६ रन बनाएर आउट भएपछि टिमलाई जीतसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी लियाम प्लंकेटको काँधमा थियो । अन्तिम २ ओभरमा ११ रन चाहिएको थियो र २ विकेट हातमा थियो ।
४९ औं ओभर बलिङ गर्न स्कटल्याण्डका सफ्याँ शरिफ आए । शरिफ उनै बलर हुन् जसले विश्वकप छनोटमा वेष्ट इण्डिजका विष्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई पहिलो बलमै बोल्ड गरेका थिए । पहिलो बलमै २ रन लिने चक्करमा अदिल रशिद रन आउट भए । त्यसपछि कार्य उड क्रिजमा आए । त्यसपछिका ३ बलमा ३ रन बने । यतिबेला इङल्याण्डलाई ८ बलमा ७ रन चाहिएको थियो र स्कटल्याण्डलाई १ विकेट । ४९ औं ओभरको पाँचौं बलमा शरिफले मार्क उडलाई एलबीडब्लु ट्रयापमा पारेपछि ७ बल बाँकी छँदै इङल्याण्ड अलआउट भयो र स्कटल्याण्डले इतिहास रच्यो ।